XOG: Kumuu ahaa sarkaalkii amray ciidankii loo qaadsay Eritrea in ay ka qeyb qaataan dagaalkii TPLF? – Hornafrik Media Network
XOG: Kumuu ahaa sarkaalkii amray ciidankii loo qaadsay Eritrea in ay ka qeyb qaataan dagaalkii TPLF?
Xogo dheeraad ah, ayaa kasoo baxaya dhalinyaradii soomaaliyeed ee lagu laayey dagaalkii TPLF ee waqooyiga Ethiopia, kuwaas oo markii hore tababar loogeeyey dalka Eretariya.s
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Ethiopia Mustafe Cagjar ayaa lasheegey in uu codsadey in ciidanka Soomaaliyeed ee Eretariya kusugnaa lasiiyo, si ay ugu qeyb qaataan dagaalka TPLF lagula jiro isagoo balanqaadey in aan wax dhib ah ka imaan doonin oo ciidanka Liyuu Policeka dowlad deegaanka loo ekeysiin doono.
Teliyaha Hogaanka Dabagalka NISA Cabdalla Daahir Cabdalla ayaa lasheegey in gacanta ku haayey Howl galkan, waxaana xogtu sheegeysaa in ciidamo gaarayey 1100 askari Soomali ah oo watay saanadooda melitery ka soo gudbeen xadka ay wadaagaan Eretariya iyo Ethiopia.
sargaalkan ayaa lafahamsanyahay in uu ku wanaagsanyahay howl gelinta ciidamada iyo Naqshadaha dagaalka hase yeeshee waxaa lagu dhaliilaa dhiig daadinta aan xadka laheen uu sameeyo xiliyada howl galada lagu jiro.
Cabdulla Dahir oo dadka qaar ugu yeeraan Ugaas Cabdalla ayaa la ogeyn xafiiskiisa shqo ee dhabta ah, walow NISA ugu magacaaban yahay Teliyaha Hogaanka Dabagalka hadana waxaa lagu tilmaamaa awooda 3-aad ee Dowlada Nabad Iyo Nolol.